सजावट मानिसको विषयमा अभूतपूर्व हाइट्स पुगेको छ। अब पर्खालहरु, फर्श, छत र अन्य भित्री वस्तुहरू सजाउनु गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सामाग्री को विश्वास नलाग्दो विविधता छ। तिनीहरूलाई बीच, साथै क्लासिक काठ र प्राकृतिक पत्थर र विदेशी सामाग्री जस्ता विभिन्न इस्पात प्यानल र पनि प्लास्टिक बोतल रूपमा।
निस्सन्देह, अलिकति को यस्तो किसिम उपभोक्ताहरु डरा। तर, पूर्ण कुनै पनि घर को लागि उपयुक्त हो कि बहुमुखी सामाग्री र तिनीहरूलाई को एक संगमरमर छ। पुरातन समयका भएकोले राजाहरूले आफ्नो महलों र स्मारक को निर्माण सजाउनु यसलाई प्रयोग। राखे संगमरमर सिढी, फर्श, स्नान गरियो, र पनि ओछ्यानमा।
भवन लागि प्राकृतिक संगमरमर छनौट केही धेरै महत्त्वपूर्ण कारक ध्यान गर्न आवश्यक छ। एक सामाग्री मोटाइ छ। यो विशेष गरी countertops र विन्डो sills सिर्जना गर्न तहहरू चयन महत्त्वपूर्ण छ। संगमरमर पनि पातलो छ भने, दबाव ढिलो सतह मा exerted वा पछि तथ्यलाई कि फिर्ता प्लेट खिच्छ नेतृत्व। एक ठूलो मोटाइ संग संगमरमर अनावश्यक प्राप्त लायक छैन। यी तहहरू स्थापना गर्नेछ जो डिजाइन, थोक सामाग्री को प्रभाव को प्रतिरोधी हुनुपर्छ, र यो एक आवासीय क्षेत्रमा विरलै आवश्यक छ।
साथै, खरीदार संगमरमर को घनत्व ध्यान गर्नुपर्छ। ठूलो पत्थर भन्दा उच्च अन्न र कम घनत्व चिस्यान र अन्य पर्यावरणीय कारक प्रभावित हुनेछ। त्यसैले, स्नान वा बगैचा मूर्तिहरु एक उच्च घनत्व र एउटा सानो अन्न आकार छ कि संगमरमर प्रजातिहरू छनौट गर्नुपर्छ। तर, पनि यस्तो पत्थर को मोहरा को सजावट प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छैन।
पनि यसको वित्तीय क्षमता र तथ्यलाई सामाग्री को कि वर्ग तपाईं घरमा चाहनुहुन्छ कि परिभाषित गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, आंकडा संग काले संगमरमर को मूल्य संगमरमर रंग अन्य यस्तै प्रकार भन्दा अलिकति उच्च हुनेछ। यो सादा seams गर्न विरोध रूपमा संगमरमर यस प्रकारको प्रकृति मा दुर्लभ छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
ढुङ्गा तमाम लागत यसको मोटाई, रंग को नियम र वास्तवमा आवश्यक क्षेत्रमा गठन गरिएको छ। संगमरमर को मूल्य बारे $ 30 प्रति 1 Sq.m. देखि सुरु सबैभन्दा पनि दुर्लभ प्रजातिहरू प्रति 1 Sq.m. $ 1000 को लागि बेच्न सक्छौं
आफ्नो हात संग भान्सा मा मरम्मत गर्न
को धुने प्लास्टिक Windows? बुझ्न प्रयास
शिक्षक एउटा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन कसरी बनाउने
कृत्रिम पत्थर को जस्तै लोकप्रिय स्नान
बवासीर लागि घ्यु। घ्यु र मह को पात बाट मोमबत्ती। लोक चिकित्सा मा घ्यु
सामूहिक ब्लग। यो के हो र किन आवश्यक छ?